Duqeymo Lagu Asqeeyay Gobolka Idlib
Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay duqeymo dhinaca cirka oo ay diyaaradaha dagaalka dowladda Suuriya maanta ka geysteen deegaanno ku yaalla dhinaca waqooyi galbeed ee Suuriya.
Duqeytan ayaa qeyb ka ah, weeraro dhinaca cirka ah oo diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa dowladda Bishar Al Asad ka wadeen tan dhamaadki bishi April, gobolka Idlib iyo qeybo ka mid ah gobollada deriska la ah sida Xaleb, Xama iyo Latakiya.
Deegaannadaas ayaa waxaa maamula kooxda mintidka ah ee Hayat Tahrir al-Sham oo ah dagaalyahanno xiriir dhaw la leh ururka Al Qacida.
Kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay dalka Britain, ayaa sheegtay in laba carruur ah ay ku jireen 11 qof oo rayid ah oo lagu dilay duqeyn Sabtidi maanta lala beegsaday degmada Ariha ee govolka Idlib.
Ilaa iyo 28 qof oo kale ayay hey’addu sheegtay in lagu dhaawacay duqeynta.
Qaramada Midoobay ayaa Jimcihi shalay sheegtay in duqeymo cirka ah oo maalmahan ay Ruushka iyo dowladda Suurka ka wadeen gobolka Idlib lagu dilay in ka badan 100 qof oo rayid ah, kaliyah maalimihi yaraa ee aanu kasoo gudubnay.